Amandla kunye nemisebenzi ye-United States Congress
Imiba Inkqubo Yezopolitiko zase-US
Ukubeka iMithetho kunye nokuLawula uMthetho
Ngoko ke yintoni na bonke abo bameli kunye nabameli abenza eCapitol Hill, kunjalo? ICongress inegunya elithile elichazwe kuMgaqo-siseko, akukho nto ibaluleke ngaphezu komsebenzi wayo wokwenza imithetho.
Isiqendu 1 somGaqo-siseko sibeka amandla eCongress ngolwimi oluthile. Icandelo 8 lithi, "ICongress iya kuba namandla ... Ukwenza yonke iMithetho eya kuba yimfuneko kwaye ifanelekile ekuqhubeni ukuPhathwa kwamandla angaphezulu, kunye nawo onke Amandla anikwe nguMgaqo-siseko kuRhulumente wase- United States , okanye nakuphi na iSebe okanye iGosa yalo. "
Imithetho ayigcini nje yomoya ococekileyo, kunjalo. Enyanisweni, inkqubo yowiso - mthetho iyabandakanyeka kwaye yenzelwe ukuqinisekisa ukuba imithetho ecetywayo inikwe ingqalelo ngokucokisekileyo.
Ngomfutshane, nayiphi na i-senator okanye i-congressman inokuthi ibonise i-bill, emva koko ibhekiswe kwikomiti efanelekileyo yokumamela. Ikomiti, kwakhona, ixubusha umlinganiselo, mhlawumbi unike izilungiso, ize ivote kuyo. Ukuba ivunyiwe, umrhumo-mali uyabuyela ekamelweni apho kwafika khona, apho umzimba opheleleyo uza kuvota khona. Kucinga ukuba abameli bayayivuma imilinganiselo, iya kuthunyelwa kwelinye ikamelo ukuvota.
Xa umlinganiselo ususa iCongress, ilungele umongameli. Ukuba zombini imizimba iye yavuma imithetho eyahlukileyo, kufuneka isisombulule kwikomidi edibeneyo yebandla ngaphambi kokuvota kwakhona ngamagumbi amabini. Umthetho uya kwindlu ye-White House, apho umongameli angasayinela khona kumthetho okanye u- veto .
I-Congress, kwakhona, inamandla okongamela i-veto kamongameli kunye nesininzi sesithathu kwisibini.
Ukongezelela, iCongress inegunya lokuchibiyela uMgaqo-siseko , nangona le nkqubo iyinde kwaye inzima. Zomibini amagumbi kufuneka avumele isilungiso somgaqo-siseko esicetywayo ngobuninzi babini kwisithathu, emva koko umlinganiselo uthunyelwa kumazwe.
Isilungiso kufuneka sivunywe ngeekota ezintathu zowiso-mthetho.
I-Congress nayo inegunya elinamandla malunga nemiba yezemali neyebhajethi. La magunya afaka:
ukuhlawula imali kunye nokuqokelela irhafu, imisebenzi, kunye neentlawulo zemali;
wabela imali ukuhlawula amatyala ka rhu lumente;
ukuboleka imali kwi-credit ye-United States;
lawula urhwebo phakathi kwamazwe nezinye iintlanga;
imali kunye nokuprinta imali; kwaye
ukwabela imali ukubonelela ngokukhuselekileyo kunye nentlalo-ntle ye-United States
Ulungiso lweshumi elinesibhozo, olwamkelwe ngowe-1913, lwandise amandla eCongress of taxation ukuba afake irhafu yentlawulo.
Amandla ayo esikhwameni ngenye yeentlola kunye nokulinganisela kweCongress kwizenzo zesebe elilawulayo
Amandla okuphakamisa nokugcina imikhosi yemikhosi yimbopheleleko yeCongress, kwaye inegunya lokuvakalisa imfazwe . I-Senate, kodwa kungeyiNdlu yabameli , inamandla okuvuma izivumelwano kunye noorhulumente belizwe langaphandle.
Amanye Amandla kunye nemisebenzi
ICongress igcina i-imeyile ehamba ngokuseka iiofisi zeposi kunye nezibonelelo zokugcina zihamba. Kwakhona ikwabela imali kwi-ofisi yesebe. I-Congress inokuseka amanye ama-arhente ukugcina ilizwe liqhuba kakuhle.
AmaQumrhu afana ne- Ofisi yoXanduva loRhulumente kunye neBhodi yoLungelelaniso lweSizwe ukuqinisekisa ukuba imali yemali kunye nemithetho iCongress of passes isetyenziswa ngokufanelekileyo. I-Congress inokuphanda kwakhona imiba yelizwe, ngokukhawuleza kubambe iintetho kwi-1970s ukuphanda i-Watergate burglary ekugqibeleni iphelile umongameli kaRichard Nixon , kwaye ityala ukuba lijongise kwaye libonelele ukulungelelaniswa kwamagatsha olawulo kunye namagqwetha.
Indlu nganye inemisebenzi ekhethekileyo. INdlu inokuqalisa imithetho efuna abantu ukuba bahlawule irhafu kwaye banokugqiba isigqibo sokuba ngaba amagosa karhulumente kufuneka aqinisekiswe ukuba uyamangalelwa ityala. Abameli bayonyulwa ukuba babe neminyaka emibili, kwaye uSomlomo weNdlu uyona wesibini kumgca wokuphumelela umongameli emva kwesekela likamongameli .I-Senate inoxanduva lokuqinisekisa ukutyunjwa kukaMongameli kwamalungu eKhabhinethi , abagwebi bamazwe kunye nabathunywa belizwe.
I-Senate iphinda ilinge nayiphi na igosa elisemthethweni elityholwa yicala lolwaphulo-mthetho, xa iNdlu ithetha ukuba ityala lilandelwe. Iisenerethi zonyulwa ukuba zibe yiminyaka emithandathu; umongameli wongameli usekela iSeneti kwaye unelungelo lokushiya ivoti xa kwenzeka ityiti.
Ukongezelela kwamagunya acacileyo achazwe kwiCandelo 8 loMgaqo-siseko, iCongress inegunya elongezelelweyo elinikeziweyo elivela kwiCandelo eliMfuneko kunye neCandelo elifanelekileyo loMgaqo-siseko.
Ukuqonda iNkqubo yokuQala yokuBala
Ngaba uMongameli uPardon ngokwakhe?
Indlela yokugijima kwiCongress
Iimali zenziwe njani ngeeBhilidi Ngokutsho kweNkqubo yeMithetho yase-US
I-Congressional Majority kunye neNcinci zeNkokheli kunye neMikhumbi
Ngubani otyunjweyo kwaye avumele iNkundla ePhathelene neNkundla ePhakamileyo?
Yintoni eyenzekayo xa u-Ukhetho lukaMongameli luTywala
I-Alphabet yeJamani, ukusuka kwi-A ukuya kwi-Z
Ubume obuMnyama kunye nezixhobo zoMculo oPhakathi kunye noBuvuselelo
Iphepha le-Wax lenza i-Container enkulu ye-Wax Leaf Pressings
Imfazwe YaseMelika: iMagosa Jikelele uGeorge Pickett
Funda iSiseko se-Anim Animation
Kuthetha ukuthini "I-Ç" ngesiFrentshi?
AmaMerika akhokela kwiGugu yobunini ngelizwe
Ukuhlola iTriton: iNeptune ye-Frigid Moon
Imfazwe YaseMelika: Jikelele u-Albert Sidney Johnston
Amafilimu kaMichael Crichton ngonyaka
Iincwadi Ezintle kakhulu kumaKristu amatsha